Gudida Anshaxa Iyo Ilaalinta Doorashada Oo Shaaciyay Sharci Cusub Iyo Masuuliyiin Ku Gefay Xeerarka Dalka Xiligii Ololaha – Araweelo News Network (Archive)
Gudida Anshaxa Iyo Ilaalinta Doorashada Oo Shaaciyay Sharci Cusub Iyo Masuuliyiin Ku Gefay Xeerarka Dalka Xiligii Ololaha
Hargeysa(ANN) Gudida anshaxa iyo ilaalinta habsami usocodka doorashooyinka golayaasha deegaanka, ayaa soo saaray qoraal saxaafada loogu tala galay oo ay ku sheegayaan shaqsiyaad masuuliyiin si cad u jedbiyay xeerarka iyo
sidoo kale waxay qoraalka ku xardheen waxyaabaha ka reeban xiliga doorashada, kadib iyo ka hor Ururada ama xisbiyada iyo doorashada ka dib. qoraalkaa oo qodobaysan ayaa u qornaa sidan:-
Waxyaabaha kareeban ururada/xisbiyada wakhtiga doorashada waxaana kareeban:
1.inuuu ku kaco howlo wiiqikara ama waxyeelikara nabadgalyada iyo daganaanshaha dalka ka hor dooorashada,doorashada dhexdeeda ,ama doorashada kadib
2.inuu adeegsado hadalo aflagaado ah ama meel kadhac ah oo sababi kara rabshadao,gacankahadal ah wakhtiga doorashadu socoto.
3.inuu boqo-galiyo musharaxiinata ,wakiilada xisbiyada /ururada,xubnaha ama taageerayaasha xisbiyada /ururada kale
4.xisbina/ururna xoog kuma qabsankaro goob doorasho si uu xoog ugu buuxsado codadka goobtaas cod-bixineed, umana adeegsan karo qaab sharci darro ah ,iskamana hor istaagi karo xisbi/urur kale codad uu sharci uhelilahaa.
5.inuu wada shaqayn layeesho saraakiisha doorashada si looxaqiijiyo codbixin udhacda si nabad galyo iyo habsami ah kuna dhamaato in si xornima ah codbixiyayaashu ugutaan xuquuqdooda carqalad la,aan iyo cabsilaan.
6. inuu dhawro islamarkaana xaqiijiyo nabad galyada hawlwadeenada doorashada iyo xubanaha kominshanka doorashooyinka qaranka xiliga u diyaar garawga doorashada ,codbixinta,iyo kudhawaaqida natiijada.
7.inay ka hortagaan fal dabiyeedkasta oo suurtagal ah inuu dhaco xiliga doorashada ,kaas oo kusaabsan hawlaha doorashada .
8.inuu qaato tilmaan kasto oo sharci ah , una hogaansamo awaamiirta komishanka doorashooyinka qaranka .
9.inuu kaqayb qaato sugida nabad galyada iyo badbaadinta saraakiihsa doorashada ka hor doorashada,doorashada dhaxdeeda iyo kadib codbixinta.
10.inaanu si sharci daro ah ufara galin shaqada saraakiisha doorashada.
11.inuu qadariyo lana shaqeeyo goobjoogayaasha caalamiga ah iyo gudida anshaxa iyo ilaalinta habsami usocodka doorashooyinka .
12.in uu dhawro isla markaana ixtiramo qarsoonaanta codbixinta.
Dhaq-dhaqaaqa Gaadiidka ee maalinta doorashada
Iyadoo laracayo sida uu jidaynayo qodabka 27aad ee xeerka lambar20-2/2006, waxaa lamam nuucay dhaqdhaqaaqa baabuur kasta oo dadwayne ,dawladeed ,ama gaar ahaaneed maalinta doorashada laga bilaabo lixda subaxnimo ilaa sideda fiidnimo.
Komishanka doorashooyinka qaran ka ayaa ah ha’yada kaliya e awood uleh xibinta ogolaanshaha dhaqdhaqaaqa baabuurta maalinta codbixinta si loom eel mariyo adeegyada guud ee aas aasiga ah iyo habsami usocodka dorashada .
Komishanka doorashada qaranka ayaa gaadiidka adeegyada guud iyo habsami usocodka doorashada lagu fulinaayo wuxuu siinayaa warqad xabag leh (sticker) oo muu jinaysa ogo laanshaha komishanka qaranka ee dhaqdhaqaaqa baabuurta ee maalinta codbixinta.
Baabuur kasta o malinta codbixinta sidan ogolaansho dhaqdhaqaaq oo komishanka doorashooyinku bixiyay,waxaa qabanaya cidanka booliska ,waxaana lasiidaynayaakadib( 8)sideeda fiidnimo ee isla malintaas.
Dhacdooyinkii dhacay wareegii udambeeyay ee Olalaha Doorashafa ee Golayaasha Deegaanka:
-Cali Xaamud Jibriirl – wasiir kuxigeenka wasaarada waxbarashada si badheedh ah ayuu ugu olalaeeyay gaadiidka dawlada xisbiga kulmiye
Ahmada Muxumad Geele-kuxigeenka haayada kahortaga masiibooyinka (NERAD) wuxuu si mugleh oofirfircoon ugu olaleeyay isagoo ah shaqaale dawladeed xisbiga kulmiye.
-Nuux sheikh –Gudoomiyaha haayada shaqaalaha dawladau waxa uu si badheedha ah u jabiyay sharciga shaqaalaha dawlada,qodabkiisa 6aad farqadiia B, oo kareebaysa shaqaalaha dawlada inaanay xisbi ama urur si fir-fircoon ugu olalayn .waxa kale oo ka horyimid wareegtadii madax –waynaha Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamad Maxamuud (siilaanyo) uu ku ayiday in aan shaqaalaha dawladu kaqayb qaadan u olalaynta xisbi ama urur gaara ah.
Waxyaabaha kale ee ay si dhaw oo fiiro iyo foojignaan leh u eegtay gudida anshaxa iyo habsami usocodka oo ay hambalyo ,bogaadin iyo amaan ba usoo jeedinayso waxaa kamid ah:
-Badhasaabada –Guud ahaan badhasabada oo ah gudoomiyayaasha gobalada wareegii u dambeeyay ee olalaha doorashada kumay milmin kamanay dhaxmuuqan olalaha doorashada waxaanay muujiyeen odaynimo iyo dhexdhaxaadnimo,waanay kumahadsanyihiin.
Waxaanay gudidu gaadiidki dawlada ka dhigtay:
Maayarka degmada Baligudadle iyo Maayarka Degmada Quri-lugid kadib markii ay cadaatay maayarkastaaba xisbi/urur gaara ah mid waliba u olaleyo ,kuwaas oo kala ah Xaqsoor iyo Kulimye.
Gunaanad kii iyo gabagabdii doorashadu waa cabiraadda rabitaanka iyo iraadada shacbiga, go,aanka kasoo baxayna waa in ay wada ixtiraamaan una hogaansamaan dhamaan xisbi /ururada u tartamaaya hogaanka siyaasada”
Published November 25, 2012 By info
Gudida Diiwaangelinta Oo Sharaxaad Ka Bixiyay Shax Mala Awaal Lagu Sameeyay Natiijada Doorashada Oo Muran Ka Dhashay
Sheekadda Qurbe-joog , Qiso Qof, Qoys iyo Qaran! By Maxamed Haaruun.Qaybtii Afraad: